Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 25, 2020 | hofisi
Nezvikonzero zvakasiyana, nhengo dzebhizinesi dzingangoda shandira pamwe kure. Semuenzaniso, panogona kuve nenhengo dzekusununguka kana nzvimbo dzingavharwa zvichitevera kurohwa. Kuti vashandi vakwanise kuenderera mberi nebasa ravo serinowanzo uye kutaurirana neumwe neumwe, kushandiswa kwechombo chekutaura seSlack kwakakosha.
Chii chinonzi Slack?
Slack chikuva chepamhepo achivatendera kudyidzana kwekudyidzana pakati penhengo dzekambani. Inozviratidza seyinoshanduka-shanduka nzira kune yemukati e-mail yekambani. Kunyangwe iyo isina kukwana uye kumwe kutsoropodzwa kunogona kuitwa kwayo, iri kukwezva makambani akawanda uye akawanda.
Slack inoita kuti ikwanise kutaurirana ruzivo munguva chaiyo, uye izvi, nenzira yakapusa zvichienzaniswa nemaemail. Yayo masisitimu system inokutendera iwe kutumira ese maviri uye yakavanzika mameseji. Iyo inopawo yakawanda mikana yakadai sekugovana faira (mavara, mufananidzo, vhidhiyo, nezvimwewo) uye vhidhiyo kana redhiyo kutaurirana.
Kuti uishandise, ingobatanidza pachikuva uye ugadzire account ipapo. Iwe unobva wave nekuwana iyo yemahara vhezheni yeSlack iyo inotopa nhamba yakakura yezvinhu. Iwe unogona kutumira email kukokwa kunhengo dzaunoda kuwedzera kune yako yekubatira.
Iyi puratifomu ine kunyatsofungidzirwa kunze uye ergonomic dhizaini. Kuti ugone kushanda zvakanaka, zvisinei, kune mashoma mashoma anoshanda ekurangarira, asi haana kuomarara. Mukuwedzera, izvo zvinokwanisika kushanda paSlack nekombuta, Smartphone kana piritsi.
Munzvimbo yega yega yebasa yakagadzirwa nekambani pachikuva, zvinogoneka kugadzira nzvimbo dzekutsinhana dzinonzi "ngetani". Themes dzinogona kupihwa kwavari kuitira kuti vagone kuiswa mumapoka zvichienderana nezviitwa mukati mekambani. Izvo zvinogoneka kugadzira cheni ye accounting, kutengesa, nezvimwe.
Izvo zvakare zvinogoneka kugadzira keteni iyo inobvumira nhengo kutengeserana, ingave inyanzvi kana kwete. Saka kuti pane kusagadzikana, nhengo yega yega ichangowana chiteshi chinoenderana nebasa rake. Semuenzaniso, grafiki dhizaini inogona kuwana mukana wekushambadzira kana wekutengesa maketeni zvichienderana nekuti bhizinesi rinoshanda sei.
Ivo avo vanoshuva kuve nekuwana chiteshi vanofanirwa kutanga vaine mvumo. Nhengo yega yega yeboka inogona zvakare kugadzira keteni yekukurukurirana. Nekudaro, kuti udzivise kutaudzana kubva mukuvhiringidzika, zvinokwanisika kuita kuti urege kuita basa iri.
Iyo nzira dzakasiyana dzekutaurirana muSlack.
Kukurukurirana kunogona kusimbiswa munzira nhatu. Yekutanga inzira yepasi rese iyo inobvumira ruzivo kutumira kune vese nhengo yekambani iripo. Yechipiri ndeye kutumira mameseji chete kunhengo dzeketeni yakatarwa. Yechitatu kutumira kwemavanzika mameseji, kubva kune imwe nhengo kuenda kune imwe.
Kutumira zviziviso, pane mashoma mafupi ekuziva. Semuenzaniso, kuti uzivise munhu akasarudzika mumaketeni, unofanirwa kunyora @ uteedzwe zita remunhu wauri kutsvaga. Kuzivisa nhengo dzese dze cheni, kune rairo @ nom-de-la-chaine.
VERENGA Izvo zvakanakisisa paIndaneti zvishandiso zvekushandura rugwaro kana peji
Kuti zivise makoji ako nezve chimiro chako (chisingawanikwe, chakabatikana, nezvimwewo), pane iyo "/ chimiro" chirairo. Mimwezve mirayiro inonakidza iripo, senge "/ giphy" chat inoita kuti utumire chat GIF. Izvo zvakare zvinoita kugadzirisa yako emojis kana kugadzira robhoti (Slackbot) inopindura otomatiki pasi pemamwe mamiriro.
Izvo zvakanaka uye zvakaipa zveSlack
Slack inopa zvakawanda zvakanakira kutanga ne kuderedzwa kwehuwandu hwe-e-mailings mukati mekambani. Uye zvakare, iwo mameseji akachinjana anochengetwa uye anozowanikwa nyore nyore kubva kubha yekutsvaga. Dzimwe nzira dzakasarudzika kana kushoma dzinobatsira dziripo nemuenzaniso we #hashtag iyo inobvumidza iwe kuwana nyore mhinduro.
Inogona kuvhurwa pane Smartphone, zvakare inobvumidza iwe kuti shanda uchibva chero kupi. Uye zvakare, inopa mukana wekubatanidza zvishandiso zvakati senge Dropbox, Skype, GitHub ... Izvi zvinosanganisirwa zvinokutendera kugamuchira zviziviso kubva kune mamwe mapuratifomu aya. Slack inopa API iyo inobvumira imwe neimwe kambani kugadzirisa kwayo kutaurirana kwayo nepuratifomu.
Panyaya yekuchengetedzeka, chikuva chinoverengera kuti iyo data yevashandisi vayo haina kukanganiswa. Saka ipapo encrypts dhata panguva yekushambadzira kwavo uye panguva yekuchengetedza kwavo. Kusimbisa masisitimu epamberi, uye kudzikisira njodzi yekubika nekukasira sezvinobvira. Naizvozvo ipuratifomu iyo kuvanzika kwekutaurirana kunoremekedzwa.
Nekudaro, nepo Slack ichiita kunge ine zvakawanda zvakanakira, zvinogona kunge zvisinga fadze munhu wese. Semuenzaniso, zviri nyore kuwana kuremerwa nemeseji uye zviziviso pachikuva. Mukuwedzera, iyo yakagadzirwa mumweya padyo neiyo yevechidiki kutanga-ups. Makambani mazhinji echinyakare saka haazonyengeri zvachose nemhinduro dzaanopa.
Slack: Sumo uye Mharidzo # 1
Slack: Shandisa mapol # #
Shanda muzvikwata uye nekure kure neSlack .. Tauriranai munguva chaiyo May 17th, 2020Tranquillus
pashureShanda kure neTeamViewer panguva yekurova
zvinoteveraMhando dzakasiyana dzekusiya, nguvai uye sei kutora mukana nazvo?
Nzira yekugadzira nzira yekudimbudzira yekhibhodi mukati Windows 10?